सुनको भाउ बढ्यो, कति छ मूल्य ? – News Dainik
सुनको भाउ बढ्यो, कति छ मूल्य ?
News desk १५ मंसिर २०७६, आईतवार ११:३३ आर्थीक प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडाैँ । साताको पहिलो दिन आइतवार नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ । आइतवार छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यसैगरी नेपाली बजारमा आइतवार तेजावी सुन प्रतितोला ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । महासंघका अनुसार, आइतवार चाँदीको भाउ भने स्थिर छ । चाँदी आइतवार प्रतितोला ८ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अघिल्लॊ उपनिर्वाचन : प्रदेशसभामा कांग्रेसले खाता खाेल्यो, भक्तपुरमा भँडेल विजयी
पछिल्लॊ उपनिर्वाचन मत परिणाम : नेकपा २२, कांग्रेस ११, राजपा र समाजवादी तीन तीन स्थानमा विजयी